Ezingavamile izivakashi yesimanje kanye nabahamba. ubunjalo Kushunyayelwe, umsindo Surf, isiko emangalisayo, amathuba ukuphumula okuhle - konke lokhu oyowunikela Vietnam. Eza lapha minyaka yonke amakhulu ezinkulungwane izivakashi ezivela emakhoneni ezahlukene wonke abafuna ujabulele isiko nefilosofi yezwe, kodwa ngendlela ophucukile uphumule. Vietnam ngeke sijabulise bonke abantu abathanda ukuhlala exotic obusezingeni eliphakeme kakhulu lobo. Lena akuyona nje enhle, kodwa ngempela ahlanzekile, ethokomele, ukhululekile. Futhi-ke, Vietnam livulekele izivakashi unyaka wonke. Yingakho, uma ufuna ukuba endaweni yasezulwini phakathi ebusika obubanda kakhulu nangenkathi isiphepho esikhulu seqhwa, Vietnam uyoba inketho kakhulu.
Yiqiniso, njengoba nanoma iyiphi enye ezweni exotic, izivakashi kufanele siqaphelisise lapho ukhetha indawo lungaba yokuhlala yabo. Kaningi, incazelo ehhotela kwi website esemthethweni ayihambisani ngokoqobo: abaningi babhekana ebhuqwini egumbini, zalapho ngobugebengu kanye nezinye nemibi hhayi emnandi kunazo, ukuthi awufuni ukubekezelela eholidini. Sithanda ivule abantu amehlo kuzo zonke izivakashi Bach Duong Ihhotela 2 *. Lena inketho sasivumela ethandwa, naphezu esigabeni ongaphakeme. Ngokusekelwe Izibuyekezo wangempela izivakashi sizama amnike ukuhlolwa Inhloso kakhulu.
Kaningi, Bach Duong Hotel Ihhotela 3 * udumo nale ziqu, kodwa empeleni oluhambisana izinkanyezi 2 kuphela. Naphezu kwakho konke lokhu, ehhotela elithokomele lesimanje, ukhululekile, ethokomele futhi angabacwasi ezishibhile. Itholakala omunye endaweni ethule kakhulu futhi akude, ogwini ethekwini olunothile. Ngesikhathi esifanayo Bach Duong Ihhotela 2 * angawi aphume empilweni yamasiko resort - nje ukuhamba ngomzuzu 7-10 kude iyona ethakazelisayo, ethandwa phakathi izivakashi kanye amaholide emgwaqeni amathilomu eziningi, imigoqo kanye zokudlela. Ukuvakashela esikhumulweni sezindiza esiseduzane kuthatha imizuzu engaphansi kwengu-30, ngezindinganiso lendawo, kuba ibanga okuncane.
izivakashi eziningi ukugcizelela ukuthi ihhotela elise. Bach Duong Ihhotela 2 * (Nha Trang) itholakala kwi emgwaqweni oseceleni, eduze kwepaki zendawo, ngokoqobo bacwiliswa zasemazweni izitshalo tropical wendawo. zonke fun on holiday ngaphakathi ukuhamba ibanga, kanye ehhotela siyaqhubeka kube kahle onokuthula ezolile. Lapha ungakwazi uphumule ngempela emva usuku engenakulibaleka.
Kunamaphuzu amaningana izimo kungase kubangele izivakashi zenzeka esakhiweni ogwini. Izindonga hhotela ngempela mncane kakhulu, ngakho uma une ubuthongo ukukhanya, cela ehhotela kusengaphambili ukuze ajabulise wena ngakwelinye icala.
Duong Ihhotela bach Nha Trang 2 * elincane kakhulu, kodwa ngempela ethokomele: izivakashi uphiwa ukuhlala 8 ejwayelekile kanye namakamelo aphakeme 12. amaholide Iningi ngikhetha nekhathazayo bayokwazisa 12 Deluxe amakamelo.
Ukuhlela kwenzeka egumbini ngo 14:00, kuxoshwa ebiza 12:00. Izingane ezingaphansi ukuhlala iminyaka 5 ubudala ngoba Bach Duong Ihhotela 2 * mahhala. Ngeshwa, izisebenzi abazange baqonde igama ngesiRashiya, ezinye izisebenzi bakhuluma isiNgisi. Kaningi, kukhona incazelo ngosizo ukuthintwa. Eqinisweni, izisebenzi nomusa futhi enobungane.
Kaningi, ebukhoneni khulula futhi ukulungele izinombolo ekuphathweni is akulindelekile olusemthethweni sokulungisa isikhathi, kanye Imiphumela inani okhiye imizuzu 10-15. Ngiyavuma, ngemva indiza eside futhi kuyakhathaza, le nto encane iba inzuzo elikhulu ehhotela, lapho ukuxhumanisa izivakashi eziningi e ezidumisa wona.
Kuyinto imfihlo ukuthi induduzo enkulu eholidini akuxhomekile nje kuphela esimweni indawo ehhotela, kodwa futhi isimo ekamelweni lakhe. Ngakho, uma uya ku-Vietnam, Ihhotela Bach Duong Ihhotela 2 * ngeke ukukunikeza induduzo ngokwanele. Ukuze microclimate egumbini ihlangabezana conditioning air. Yiqiniso, endabeni umonakalo ezincane ukuthi kunalokho ngokushesha aqedwa Ochwepheshe.
Othile satellite TV kungase kubonakale okunethezeka eholidini - uza lapha ukuze sijabulele ukuthula, nokuzola. Noma kunjalo, bonke amafulethi anemisila flat-screen TV satellite iziteshi, kuhlanganise Russian. Ngaphezu kwalokho, igumbi ngalinye has a yocingo, mini-bar, kanye nekamelo lokugezela yangasese. Ifenisha akuyona entsha, kodwa zisesimweni esikahle.
Izivakashi sinake ukuthi amakamelo abasakwazi elikhanyayo, libanzi futhi, okubaluleke kakhulu, ihlanzekile. Imibhede zenziwa nge elinemishwe omnandi emhlophe. Yokugezela akuwona amathawula kuphela, kodwa futhi kuyadingeka okugeza izesekeli, ngasendleleni, asezingeni elifanele. Amakamelo Deluxe babe emangalisa kuvulandi ukubukwa ogwini futhi ubuhle bendawo. Izivakashi uthanda ukuthola khona kusihlwa nge ingilazi yewayini futhi ujabulele kwelanga.
Ekhuluma amaphutha ehhotela, izivakashi usho izindonga mncane futhi soundproofing ezinjengendle - Ngizwe ngokoqobo ngaso sonke isikhathi omakhelwane. Hhayi ngempela iqiniso ezimnandi eholidini. Amakamelo abanalo ephephile, kodwa for imali eyengeziwe wena ngomusa ahlinzeke indawo ukugcina imibhalo, eziyigugu nemali edilini lomshado. Cishe lena yiyona ethile kuphela Bach Duong Ihhotela Nha Trang 2 *. Indawo amanani zingaphezu okungabizi. Izindleko endlini ephindwe kabili ejwayelekile iqala ruble 1000-1200 ubusuku ngabunye.
EVietnam, eningi indawo enhle nemvelo acwebile, yingakho izivakashi kanye amaholide ukuthatha emabhayisikili eziqashisayo - uhlobo ethandwa kakhulu zokuthutha lapha. Lokho-ke sahamba kude ngasogwini. Ngaphezu kwalokho, ihhotela Bach Duong Ihhotela 2 * unikeza zonke izihambi yokupaka khulula.
Izivakashi uqaphele ukuthi ihhotela akanawo yokudlela ayo, ngisho ejwayelekile ongakhetha ibhulakufesi Asian ngeke ubone lapha. Ukudla kungenziwa bejabulela ku zokudlela wendawo nemigoqo, esebenza sokudla okwehla esiphundu cuisine kazwelonke. Budebuduze Bach Duong Ihhotela 2 * kuyinto Tuans cafe, zithandwa kakhulu phakathi izivakashi.
Ezinye izivakashi ukuthatha uhambo, izindleko ehlanganisa ibhulakufesi. Wakwenza njani lokho? Konke ilula: e Kulokhu, hambisa ihhotela Bach Duong Ihhotela 2 * abazitholayo izitembu ukudla lokubhukuda ehhotela elaliseduze.
Abaningi amahhotela Vietnam kungaba ozibongayo isevisi unqambothi futhi inkonzo ekhexisayo. Kanti kungokunye - Bach Duong Ihhotela 2 * (Vietnam). Uma ukuhlola bonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni uzothola iphasiwedi inthanethi wireless. abasebenzi friendly uhlale ekulungele ukusiza aphendule yonke imibuzo yakho.
Amathawula washintsha nsuku zonke, amashidi - ngokwezinga yokungcola. Amakamelo ezimanzi bahlanza njalo, ngaphandle kokuphazamisa lonke ezolile futhi kukalwa. Abasebenzi unake uzama ukuwafeza wonke umsebenzi ngokungabi bikho izivakashi, ngakho ebuyela ekamelweni kwakha umuzwa nokuhlanzeka kanye freshness. Futhi konke lokhu Bach Duong Ihhotela 2 *.
Izibuyekezo ukugcizelela ukuhlala kanjani ukhululekile emakamelweni. Kuyadingeka izivakashi bathola lolwandle amathawula phambili ukuphatha.
Izivakashi uqaphele ukuthi kuya ogwini lapha ngokoqobo endlini ngendlu. Vele 100 amamitha kude - futhi uwena ogwini. Ihhotela ngempela komugqa wokuqala. Mayelana esiphehla mali encane futhi iphupho kwakungenakwenzeka. Uma uthanda iholidi beach, nakanjani kufanele ukunambitha abathobekileyo Bach Duong Ihhotela 2 *. Izivakashi kugcizelela nje emangalisa kanjani futhi emuhle lolwandle lapha. Crystal izinhlanzi eziningi emanzini acwebile, isihlabathi bushelelezi, izitshalo elimhlophe elishisayo, udala umthunzi ezimnandi - yini okudingeka ukuba uphumule. Izivakashi akuzona eziningi, ngisho isizini, ngakho uzothola ithuba eliyingqayizivele ukuba uchithe amaholidi kwakho wedwa, bakwazi ukusungula uhlobo, isimo sezulu, ukuba adla. Ngemva okumatasa muzi ijubane bebangalasa zokuphila kuyadingeka ngempela.
Izivakashi bathi ebhishi is bahlanza nsuku zonke futhi ngisho bahlolwe usebenzisa imishini ekhethekile. Kukhona zamadola 3-4 kuphela ungakwazi ukuqasha lounger nge kumatilasi esithambile futhi isambulela, ukufihla elangeni elishisa bhe. By the way, ngaphambi uhambo kuyadingeka ukuze Thenga umuthi wokuvikela isikhumba elangeni factor Ukuvikelwa okusezingeni eliphezulu, okuzokwenza ukuvimbela lwalapho kushiswa khona isikhumba.
Imfashini kusihlwa ukungcebeleka eduze kwaleli chibi - ke kuyinto enhle futhi kahle, it is itshalwe endleleni izihlahla zasezindaweni ezishisayo, ezakhiwe emithonjeni nasezindaweni zokudlala, imishini umsebenzi, ithandwe kulezizinsuku. Kusukela ehhotela, ungathatha amanye hambo kuhle ezithakazelisayo futhi okungabizi. abasebenzi friendly kuzokusiza uthole inketho ezuzisayo. Ukuze ezikhangayo edume kakhulu kuleli zwe kungaphelele - 13 amahora ukuthutha wendawo.
Uma isikhathi sakho iholide lilinganiselwe futhi awukwazi ukuma ohambweni olude, kungcono ukuba ayiyeke le uhambo, kulapho izindleko ke siphakeme ngokwanele. Kuyaphawuleka ukuthi izindawo emhlabeni resort ngempela enhle, umbukwane eziphawulekayo. Iningi lazo kungokwemvelo ngokwemvelo. Ngesikhathi sebehlezi ogwini ungakwazi ukuqasha yezemidlalo kanye diving. Phela, Vietnam - nendawo enkulu kulabo abafuna ungene okokuqala ngaphansi kwamanzi.
Ukuze nezinkanyezi zalo Bach Duong Ihhotela 3 * (Vietnam, Nha Trang) - Ihhotela, okuyinto kuningi angayithandi. amakamelo Deluxe nge emphemeni ukunikela imibono emangalisa ogwini, ngezindlela eziningi ekamelweni aphakeme ehhotela nge star ngaphezulu. Nalapha futhi, kufanele sikhumbule ukuthi eVietnam, amahhotela amaningi nje ayihambisani esigabeni ngokuvumelana incazelo. Iqiniso lokuthi imali singabangela uthola inketho esihle, cishe kuphela sicela.
Medvezhegorsk amahhotela. Incazelo kanye nentengo